Muxuu Yahay Codsiga Kylian Mbappe Uu U Gudbiyey PSG Ee Aan Wali La Aqbalin - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaMuxuu Yahay Codsiga Kylian Mbappe Uu U Gudbiyey PSG Ee Aan Wali La Aqbalin
Muxuu Yahay Codsiga Kylian Mbappe Uu U Gudbiyey PSG Ee Aan Wali La Aqbalin
July 4, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, PSG, Suuqa Kala Iibsiga 0
Xiddiga reer France ee Kylian Mbappe ayaa codsi aan wali la aqbalin u diray kooxdiisa Paris Saint-Germain, xilli uu gabogabo yahay heshiiska uu kula jiro kooxdaas.
22 jirkan ayaa hore ugu sheegay kooxdiisa in aanu doonayn in uu heshiis cusub u saxeexo oo uu iskaga xagaagan ama marka uu dhamaado qandaraaskiisu 11 bilood kaddib.
Mbappe ayaa la sheegay in uu leeyahay laba ujeeddo oo midka hore tahay in uu si wanaagsan oo heshiis ah uga tago kooxdiisa PSG, isla markaana ay sii iibiyaan si ay uga helaan lacag, iyo midka labaad oo ah in uu sii joogo illaa inta uu dhamaanayo qandaraaskiisu, kaddibna uu si xor ah ugu wareego kooxda reer Spain ee Real Madrid sannad kaddib.
Arrinta labaad ayaa ah midda ugu suurtogalsan ee waqtigan muuqata in ay dhici karayso, maadaama aanay PSG diyaar u ahayn in ay iibiso waqtigan, sababta ay kooxda reer France sidan u samaynaysaana waxay tahay in ay ka dhursugto laacibkeedan oo ay ku qalqaaliso in uu beddelo go’aanka bixitaanka oo uu saxeexo heshiis cusub.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay, in Mbappe uu dareensan yahay in xalka u wanaagsan labada dhinac ba, halka kooxduna ay doonayso kaliya in uu saxeexo qandaraas cusub laakiin sannado kaddib loo ogolaan doono in uu tago, haddii uu doonayo.
Laakiin arrintanna ma noqon doonto mid sahlan sababtoo ah, sharciga ciyaaraha Faransiiska qodobkiisa 202 ayaa ka mamnuucaya kooxdaha ka dhisan dalkaas, in ay heshiisyada ciyaartoyda ku dari karaan qodob dhigaya waqti uu iska tegi karayo.
PSG iyo Mbappe waxay gaadhi karayaan heshiis qarsoodi ah oo iyaga u gaar ah, laakiin taasina waxay abuuri karaysaa khatar. Paris waxay wada-hadallo noocan oo kale ah oo ku saabsanaa heshiis qarsoodi ah ay ula yeelatay Neymar, kaas oo ahaa in loo ogolaado in uu ku laabto Barcelona laakiin xaqiiqada ayaa waxay noqotay in laacibka reer Brazil aanu dib ugu laaban kooxdiisa hore, sababtoo ah sharciga France ayaa mamnuucaya arrintan.
Si kastaba, PSG oo qaab xor ah ay xagaagii hore uga tageen Thiago Silva iyo Edinson Cavani ayay dhinaceeda tahay wax adag, in ay ogolaato iyadoo uu Kylian Mbappe si xor ah uga tegayo.